Macluumaadka Asturnaanta - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Macluumaadka Asturnaanta
Qaybta A. Hordhac
Waad ku mahadsan tahay booqashada websaydhka Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington. Ogeysiiska Asturnaanta wuxuu ka hadlayaa ururinta, isticmaalka, iyo amniga iyo helitaanka macluumaadka laga heli karo iyadoo la adeegsanayo degelkeenna. Ogeysiiskani wuxuu daboolayaa mowduucyada soo socda:
Macluumaadka la ururiyey iyo sida loo adeegsado
Macluumaadka shakhsiyeed iyo doorashada
Helitaanka dadweynaha ee macluumaadka
Soo bandhigida macluumaad gaar ah ama mid gaar ah
Dib u eegista iyo sixida macluumaadka shaqsiyaadka lagu aqoonsan karo
Kukiyada iyo tufaaxada
Qaybta B. Macluumaadka la ururiyey iyo sida loo adeegsado
Haddii aadan waxba ka qaban muddada booqashadaada websaydhkaaga laakiin aad daalacatid, akhrido bogagga, ama aad kala soo baxdo macluumaadka, waxaan soo ururin doonnaa oo aan kaydin doonnaa macluumaad gaar ah oo ku saabsan booqashadaada. Macluumaadkani shaqsi ahaan kuuma aqoonsan doono.
Waxaan si otomaatig ah u ururineynaa una keydinaa macluumaadka soo socda ee ku saabsan booqashadaada:
Cinwaanka Borotokoolka Internetka iyo magaca domainka la isticmaalay. Cinwaanka Borotokoolka Internetku waa aqoonsi lambar oo loo qoondeeyay adeeg bixiyahaaga internetka ama si toos ah kombuyuutarkaaga. Waxaan u adeegsanaa Cinwaanka Borotokoolka Internetka si aan kuugu toosino taraafikada internetka. Cinwaankan waxaa loo tarjumi karaa si loo go'aamiyo magaca domain ee adeeg bixiyahaaga (tusaale ahaan xcompany.com ama yourschool.edu).
Nooca biraawsarka iyo nidaamka qalliinka aad adeegsatay.
Taariikhda iyo waqtiga aad booqatay degelkan.
Bogagga ama adeegyada aad ka heshay boggan.
Websaydhka aad booqatay kahor imaatinka degelkan.
Macluumaadka aan si otomaatig ah u ururinno ama u kaydinayno waxaa lagu qoraa oo loo adeegsadaa Ganacsiga kaliya si loo hagaajiyo waxyaabaha ku jira adeegyadayada shabakadda iyo inay naga caawiso inaan fahamno sida dadku u adeegsanayaan adeegyadayada. Ganacsiga wuxuu falanqeeyaa diiwaangelinta bogga si loo go'aamiyo sida loo adeegsado degelkeenna, si aan si joogto ah ugu sii wanaajinno waxtarka barta ay bulshada u leedahay.
Waxa aan soo aruurino haddii aad ku tabarucdo macluumaad.
Haddii inta lagu guda jiro booqashadaada boggayaga internetka aad kaqeybqaadato sahan, aad dirto emayl, ama aad wax kale oo macaamil ganacsi ah ku sameyso khadka tooska ah, macluumaadka soo socda ee dheeriga ah ayaa la ururin doonaa:
Cinwaanka emaylka iyo waxyaabaha ku jira kuwa nala soo xiriira Email-ka.
Macluumaadka ayaa si mutadawacnimo ah uga jawaabey sahan.
Macluumaadka ayaa tabaruc ahaan loogu sameeyay foomka khadka tooska ah ujeeddo kale awgeed.
Waxaan u adeegsan doonnaa emaylkaaga inaan kaaga jawaabno, wax ka qabanno arrimaha laga yaabo inaad aqoonsato, sii hagaajiso degelkeenna, ama u dirno emaylka hay'ad kale tallaabo ku habboon.
Qaybta C. Macluumaadka Shakhsiyeed iyo Xulashadiisa
Waad dooran kartaa inaad ku bixiso macluumaad shakhsiyeed khadka tooska ah.
“Macluumaadka shaqsiyeed” waa macluumaad ku saabsan qofka oo si fudud loogu aqoonsan karo shaqsigaas gaarka ah. Macluumaadka shakhsiyeed waxaa ka mid ah waxyaabaha sida magaca qofka, cinwaankiisa, iyo lambarka taleefankiisa. Magaca domain ama cinwaanka Borotokoolka Internetka looma tixgeliyo macluumaad shaqsiyeed.
Ma ururin karno macluumaad shaqsiyeed oo adiga kugu saabsan mooyee inaad si ikhtiyaari ah noo siiso annaga oo noo soo diraya Email, ka qayb qaadashada sahan, ama buuxinaya foomka on-line-ka ah. Waxaad dooran kartaa inaadan nala soo xiriirin Emailka, aad kaqeybqaadato sahan ama aad bixiso macluumaad shakhsiyeed adoo adeegsanaya foomka on-line-ka ah. Taabadalkeed waxaad naga soo wici kartaa 360.753.7426 ama waxaad noo soo diri kartaa warqad (Waaxda Ganacsiga, PO Box 48300, Olympia, WA 98504-8300). Xulashadaada ah inaadan kaqeyb qaadan nashaadaadkaan ma dhaawici doonto awoodaada inaad ku dhex wareegto bogga Ganacsiga oo aad aqriso ama aad kala soo baxdo wixii macluumaad ah ee lagu bixiyo goobta.
Haddii macluumaadka shakhsi ahaaneed laga codsado websaydhka ama ay ku tabarucaan isticmaalaha, sharciga gobolka iyo Sharciga Qarsoodiga ee federaalka ee 1974 ayaa ilaalin kara. Si kastaba ha noqotee, macluumaadkani wuxuu noqonayaa diiwaanka dadweynaha mar alla markii aad dhiibto waxaana laga yaabaa in lagu sameeyo kormeer dadweyne iyo nuqul haddii uusan ilaalinayn sharciga federaalka ama gobolka.
Haddii aad rumeysan tahay in macluumaadkaaga shaqsiyeed / gaar ahaaneed loo adeegsanayo ujeedo kale oo aan ahayn tii la rabay markii la soo gudbiyey, waxaad la xiriiri kartaa Ganacsiga sida ku cad Qaybta Macluumaadka Xiriirka ee bayaankan.
Isticmaalayaasha waxaa looga digayaa in aruurinta macluumaadka shaqsiyeed ee laga codsaday ama ay ku tabarucaan caruurta on-line-ka ama emaylka loola dhaqmi doono si la mid ah macluumaadka uu bixiyo qof weyn, lagana yaabo inay ku xirnaato marinka dadweynaha.
Qaybta D. Helitaanka Dadweynaha ee Macluumaadka
Gobolka Washington, sharciyo ayaa jira si loo hubiyo in dowladdu furan tahay dadweynuhuna waxay xaq u leeyihiin inay helaan diiwaanno habboon iyo macluumaad ay hayaan dowlad-goboleedku. Isla mar ahaantaana, waxaa jira waxyaabo ka reeban xuquuqda dadweynaha ee marin u helka diiwaannada dadweynaha ee u adeegaya baahiyo kala duwan oo ay ku jiraan asturnaanta shaqsiyaadka. Sharciyada gobolka iyo federaalka labaduba waxay bixiyaan waxyaabo ka reeban.
Dhammaan macluumaadka laga soo ururiyey boggan waxay noqonayaan diiwaan dadweyne oo laga yaabo inay ku xiran tahay kormeer iyo nuqul ay ka sameeyaan xubnaha dadweynaha, haddii aan laga dhaafin sharciga. RCW 42.56. 070 (1) dhigayaa in:
Hay'ad kastaa, iyadoo la raacayo qawaaniinta la daabacay, waxay u diyaarin doontaa baaritaanka dadweynaha iyo nuqul ka sameynta dhammaan diiwaanada dadweynaha, haddii aysan diiwaankaasi ku dhicin ka-dhaafitaanka gaarka ah ee qodob hoosaadka (6) ee qaybtaan [RCW 42.56.070 (6)], Cutubka 42.56 RCW, ama qaynuun kale oo ka reebaya ama mamnuucaya bixinta macluumaad gaar ah ama diiwaanno. Ilaa inta loo baahan yahay si looga hortago duulaan aan macquul ahayn oo danaha gaarka ah ee gaarka loo ilaaliyo Cutubka 42.56 RCW, hay'ad ayaa tirtiri doonta faahfaahinta aqoonsiga qaab waafaqsan Cutubka 42.56 RCW markay diyaariso ama daabacdo diiwaan kasta oo dadweyne; si kastaba ha noqotee, xaalad kasta, caddaynta tirtirka waxaa si buuxda loogu sharxi doonaa qoraal ahaan.
Haddii ay dhacdo isku dhac u dhexeeya Ogeysiiskan Asturnaanta iyo Sharciga Diiwaanada Dadweynaha ama sharci kale oo xukuma shaacinta hay'adda diiwaannada, Sharciga Diiwaanada Dadweynaha ama sharciga kale ee khuseeya ayaa xakameyn doona.
Qaybta E. Bixinta Shakhsiyeed / Macluumaadka Gaarka ah
Ganacsigu wuxuu kaa codsan karaa / kaaga baahan karaa inaad siiso macluumaad gaar ah / mid gaar ah si loo sameeyo macaamil ganacsi khadka tooska ah. Macluumaadka waa la codsaday / loo baahan yahay si loo buuxiyo macaamil noocan oo kale ah. Waad dooran kartaa inaadan bixin macluumaadkan, laakiin haddii aad doorato inaadan bixin, ma awoodi doonno inaan ka shaqeyno macaamil ganacsi, waana inaad la xiriirtaa Ganacsiga si aad u dhammaystirto isla shaqada qof ahaan ama boostada.
Qaybta F. Dib-u-eegista iyo Sixitaanka Macluumaadka Shakhsi ahaan Lagu Aqoonsan Karo
Waad dib u eegi kartaa wixii macluumaad ah ee shakhsi ahaan lagu garan karo ee aan kaa soo aruurinno adiga oo adeegsanaya macluumaadka ku jira qaybta Macluumaadka Xiriirka dhammaadka ogeysiiskan. Waxaad kugula talin kartaa isbeddelada macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la aqoonsan karo ee aad rumeysan tahay inay khalad yihiin adoo soo diraya emayl ama codsi qoraal ah oo si kalsooni leh u muujinaya khaladka. Waxaan qaadi doonaa talaabooyin macquul ah si aan u xaqiijino aqoonsigaaga ka hor intaanan ogolaan helitaanka ama sixitaanka. (RCW 43.105.310)
Qaybta G. Kukiyada
Kukiyada hadda waxaa laga isticmaalaa qeybta bidix ee gacanta si loo ballaariyo menus. Si aad u dhex socoto adigoon isticmaalin menu-ka gacanta bidix, fadlan isticmaal khariidada bogga oo ku yaalo baarka kore ee safka, safka labaad, midig fog.
Qaybta H. Amniga
Waaxda Ganacsiga ee Washington, iyada oo ah horumariye iyo maamule websaydhada Ganacsiga, waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah si loo ilaaliyo sharafta xogteeda ugana hortagto helitaanka aan la oggolaan ee macluumaadka aan hayno. Tallaabooyinkan waxaa loo qaabeeyey oo loogu talagalay in looga hortago musuqmaasuqa xogta, xannibaadda marin aan la aqoon ama aan la oggolayn ee nidaamyadeenna iyo macluumaadkeenna, iyo in la siiyo ilaalin macquul ah oo ku saabsan macluumaadka gaarka ah ee aan gacanta ku hayno
Macluumaadkan waa inaan loo macneeyn si kasta oo la siinayo ganacsi, sharci, ama talo kale, ama dammaanad qaadasho ahaan caddeyn la'aan, amniga macluumaadka lagu bixiyo websaydhada Ganacsiga.
Qaybta I. Afeef
Websaydhada Ganacsiga wuxuu leeyahay xiriiriyeyaal badan oo bogagga kale ah. Kuwaas waxaa ka mid ah isku xirka degellada ay ka shaqeeyaan hay'adaha kale ee dowladda, ururrada aan macaash doonka ahayn, iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Markaad ku xireyso degel kale, kuma sii jirtid websaydhada Ganacsiga oo Ogeysiiska Asturnaanta ma khuseeyo. Markaad ku xireyso degel kale, waxaad ku xiran tahay siyaasadda asturnaanta ee boggaas cusub.
Midkoodna gobolka Washington, ama hay'ad kasta, sarkaal, ama shaqaale katirsan gobolka Washington ma dammaanad qaadayso saxsanaanta, kalsoonida, ama waqtigana ee macluumaad kasta oo uu daabaco nidaamkan, mana ansaxinayo wax kasta oo ka kooban, aragtiyaha, alaabooyinka, ama adeegyada ku xiran nidaamkan. , looma saari doono mas'uuliyadda wixii khasaaro ah ee ka dhasha ku tiirsanaanta saxnaanta, isku halaynta, ama waqtiga ku habboon ee macluumaadkaas. Qaybaha macluumaadka noocaas ah waxay noqon karaan kuwo khaldan ama aan hadda ahayn. Qof kasta ama hay'ad kasta oo ku tiirsan macluumaad kasta oo laga helo nidaamkan waxay ku kacdaa iyada oo nafteeda khatar u ah.
Qeybta J. Macluumaadka Xiriirka Waaxda Ganacsiga
360.725.4000 ama booqo bartayada Nala soo xiriir .
Xaaladaha Heshiiska Helitaanka Isticmaalka Codsiga Diiwaanka Dadweynaha